Netizen Report: Hanaisotra ny Fahazoan’ny Rehetra Mampiasa Lahatsary sy Hira Ny Volavolan-dalàna Shiliana Misahana ny Fizakamanana · Global Voices teny Malagasy
Netizen Report: Hanaisotra ny Fahazoan'ny Rehetra Mampiasa Lahatsary sy Hira Ny Volavolan-dalàna Shiliana Misahana ny Fizakamanana
Voadika ny 27 Mey 2016 16:39 GMT
“All Rights Reserved.” Fandokoan'i Frits Ahlefeldt, navoaka ho azon'ny rehetra ampiasaina.
Manome topimaso ny fanamby, fandresena, ary ny zava-misongadina momba ny zo an'aterineto manerana izao tontolo izao ny Netizen Report an'ny Global Voices.
Ao anatin'ny herinandro ho avy dia hifidy ny tolo-dalàna ahafahana mamafa ny fahafahan'ny mpisera an'aterineto mizara lahatsary sy mozika an-tserasera ny Antenimieran-doholona ao Shily. Io volavolan-dalàna io dia mety hanitsy ny lalàna efa misy ao Shily momba ny asakanto feo sy sary amin'ny fanerena ny mpamorona azy hametraka ny asa rehetra ho eo ambany fizakamanana [copyright] ary hitady tambiny (i.e.vola) ho takalon'ny fampiasana azy.
Ny fanitsiana dia mametraka fa ny mpandray anjara rehetra amin'ny fanatontosana feo sy sary izay tondroin'ny lalàna ho mpanoratra dia tokony mahazo vola raha vao misy mampiasa ny asany an-tserasera, eny fa na dia tsy mitaky ny handoavana vola aza izy ary tsy tia izany. Mety mihatra izany ao anatin'ny fotoana mampanakery ny fizakamanana copyright [zon'ny mpamorona], ary mety ampiharina amin'ny asakanto ao an-toerana sy any ivelany.
Araka an'i Luis Villarroel avy ao amin'ny Innovarte, Fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana Shiliana natokana hampiroboroboana ny fomba fijery voalanjalanja amin'ny fizakamanana ara-tsaina, ny lalàna dia ampiroboroboin'ny Konfederasiona Iraisampirenen'ny Fikambanan'ny Mpanoratra sy ny Mpamoronkira sy ampiroboroboin'ny fikambanana mpanangona ny zon'ny mpamorona. Samy mailaka izy sy ny hafa hanasongadina fa ny saran'ny lisansa vaovao dia hotantanin'ny fikambanana mpanangona ny zon'ny mpamorona ihany.
Sarotra ny maminavina an-tsaina ho tahaka ny ahoana no hametrahan'ny mpampihatra lalàna izany lalàna izany eo amin'ny tontolo nomerika, raha tsy natsangana hamaly ny zavatra takiana ao anatin'ny firenena iray manokana ny tranokala tahaka ny YouTube sy Vimeo. Afa-mieritreritra ny tsirairay fa mety ho lasa tsy ampiasaina intsony ny sehatra mifototra manontolo amin'ny Creative Commons, tahaka ny Free Music Archive [Arisivan'ny Mozika Malalaka].
Raha mandany ity lalàna ity ny Antenimieran-doholona ary ankatoavin'ny mpanatanteraka, dia tsy manantsafidy hametraka ny asany ho azon'ny rehetra na any amin'ny lisansa malalaka intsony, tahaka ny Creative Commons, ireo Shiliana mpamoron-javakanto feo sy sary. Raha tsy mazava loatra ny mety ho fiantraikan'ny fampiharana ity lalàna ity eo amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny sehatra an-tserasera, tahaka ny YouTube sy ny Vimeo, dia tsy isalasalana fa hametra ny fisosan'ny votoatim-pamoronana maimaim-poana amin'ny siniben-tserasera io lalàna io.
Nandresy tao amin'ny fitsarana tao Azerbaijan i Khadija Ismayilova, mpanao gazety
Noafahana i Khadija Ismayilova, mpanao gazety, tamin'ny 25 mey rehefa nandany 537 andro tao am-ponja rehefa nampihena ny saziny ny Fitsarana Tampony raha nampakatra ny fitsarana. Notazonina am-ponja i Ismayilova tamin'ny Desambra 2014 raha voampanga amin'izay heverina ho misy ifandraisana amin'ny tati-baovao nataony momba ny kolikolin'ny governemanta sy ny fianakavian'ny filoha Azerbaijani, Ilham Aliyev. Nampanantena ny hanohy ny asany amin'ny maha-mpanao gazety azy i Ismayilova tao amin'ny hafatra Facebook iray.
Nosakanan'i Vietnam noho ny hetsi-panoherana ny Facebook sy ny Instagram
Nosakanana tao Vietnam ny Facebook sy ny Instagram taorian'ny hetsi-panoherana noho ny nisian'ny voina ara-tontolo iainana iray. Nampiasa fatratra ny media sosialy ny mpanao fihetsiketsehana nandritra ny hetsi-panoherana, na izany hanomanana na izany izarana sary avy amin'ny famoriam-bahoaka.
Natsipin'ny Antenimieran-doholona Nizeriana ny ‘volavolan-dalànan'ny media anti-sosialy’
Tamin'ny herinandro lasa teo, nesorin'ny antenimieran-doholona Nizeriana ny tolo-dalàna Fanangona-tsonia Kiadaladala (tsy matotra), izay antsoina ihany koa hoe “volavolan-dalànan'ny media antisosialy”, ary nahantony izay mety ho fiheverana rehetra momba ity lalàna ity. Ity tolo-dalàna ity dia mahavoasazy hatramin'ny roa taona am-ponja izay manao filazana diso na tafahoatra amin'ny alalan'ny hafatra an-dahatsoratra, WhatsApp na sehatra media sosialy hafa. Voatsikera fatratra noho ny fanimbana heverina ho aterany amin'ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera. Nilaza ny filohan'ny vaomieran'ny raharaham-pahefam-pitsarana, zon'olombelona ary ny raharaham-pitsarana hoe, “Na dia nokendrena hampihemotra ireo fanangona-tsonia kiadaladala sy be vazivazy aza ny volavolan-dalàna, dia hanimba kokoa fa tsy hanasoa ny hamadihana azy ho lalàna amin'izao endriny ankehitriny izao.”
Tsy ilaina [ho an’]ny fitsarana, hoy ny Malayziana mpanao lalàna
Nanolotra ny fanitsian-dalànan’ny Fifandraisana sy ny Fampitam-Baovao Marolafy nivoaka tamin'ny 1988 ny governemanta Malayziana ahafahan'ny Vaomieran'ny Fifandraisana sy ny Fampitam-Baovao Marolafy manana fahefana bebe kokoa hampangina ny tsikera an-tserasera, amin'ny famelana azy hanaisotra votoaty an-tserasera tsy mila fanaraha-maso. Io tolo-dalàna io ihany koa dia hitaky ny tsy maintsy hanoratana anarana ny blaogy sy ny tranonkala politika, sy hampiakatra ny fanasaziana amin'ny fandikan-dalàna mifandraika amin'ny “votoaty tsy ilaina”. Navitrika ny manampahefana tao Malayzia tamin'ny herintaona tamin'ny fiezahana hanivana votoaty an-tserasera, tamin'ny fanakatonana tranonkalam-baovao, blaogy ary gazety [mg] noho ny famoahana vaovao kolikolin-governemanta mahavoarohirohy ny Praiminisitra Najib Razak.
Notsipahan'ny manampahefana Ghaneana ny fandrisihan'ny orinasam-pifandraisandavitra hanivana ny WhatsApp sy Viber
Tamin'ny famaliana ny fangatahan'ny orinasam-pifandraisana tamin'ny Fahefam-Pirenena Misahana ny Fifandraisandavitra hanakana ny mpamandrika tsy hampiasa antso amin'ny aterineto, dia nilaza ny minisitry ny fifandraisandavitra ghaneana fa tsy manana drafitra handrara [mg] ny WhatsApp, Skype na Viber.
Lasa nandrara tokoa ny aterineto i Venezoelà
Manamafy ny fikarohana vaovao fa farafahakeliny tranonkala 43 no voasakana ao Venezoelà [mg], ary ny ankamaroan'izy ireo dia mifandraika amin'ny varo-maizin'ny vola vahiny [devizy]. Na izany aza, ny 19 isanjaton'ny habaka voasakana dia mifandraika amin'ny fampitam-baovao, 12 isanjato blaogy mitsikera ny antoko mitondra ary 9 isanjatao mifandraika amin'ny filokàna. Ny fampahafantarana ny fomban'ny governemanta manakana tranonkala, ary anisan'izany ireo tranonkala voasakana, dia heverina ho tsiambaratelom-panjakana”.
Natomboky ny sampan-draharaha shinoa misahana ny tontolon'ny aterineto ny fitsirihana indray ny lafiny fiarovana amin'ireo orinasan-teknolojia vahiny
Nanaovan'ny manampahefana shinoa amin'ny alalan'ny Andrimpanjakana misahana ny tontolon'ny aterineto ao Shina fitsiriham-piarovana ny orinasan-teknolojia vahiny, ka tafiditra amin'izany ny Apple. Na dia tsy mazava aza hoe inona no tena tadiavin'ny manampahefana, dia efa nampanantsoina hamaly fanontaniana momba ireo vokatra, indrindra fa amin'ny fanafenan-tsoratra sy ny fitehirizan-dalatahiry na ny mpiasa na ny mpiandraikitra amin'ireo orinasa. Na dia maro aza ny firenena mitaky izany fitsiriham-piarovana izany amin'ny vokatra izay ho ampiasain'ny miaramila, dia lasa ampiharina amin'ireo teknolojia malaza amin'ny mpanjifa ao Shina izany fitsiriham-piarovana izany.
What is the state of digital security and digital rights advocacy in the Middle East and North Africa? – Wafa Ben Hassine sy Reem Al Masri ho an'ny Association for Progressive Communications
How the Chinese Government Fabricates Social Media Posts for Strategic Distraction, not Engaged Argument – Gary King, Jennifer Pan, ary Margaret E. Roberts
La batalla en 140 caracteres: Un monitoreo al discurso contra la prensa en las cuentas de funcionarios e instituciones del Estado – Fundamedios, Ekoadaoro (lahatsoratra amin'ny teny espaniola)
Mamandriha Netizen Report amin'ny alalan'ny imailaka
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Ellery Roberts Biddle, Weiping Li, Hae-in Lim ary i Sarah Myers West.
Ny lova navelan'ny mpiteny Yaghan farany ao Shily
Fiteny 21 Avrily 2022
Fifidianana 18 Janoary 2022
Fahalalahàna miteny 06 Aogositra 2021